ဒေါ်နယ်ထရန့် ရာထူးမှ ဆင်းပေးရစေရန် သတင်းပေးနိုင်သူအား ဒေါ်လာ ၁ဝ သန်း ချီးမြှင့်မည် - Yangon Media Group
ဝါရှင်တန်၊ အောက်တိုဘာ ၁၅
အမေရိကန်သမ္မတဒေါ်နယ်ထရန့် လွှတ်တော်တွင် စွဲချက်တင်ခံရပြီး ရာထူးမှဆင်းပေးရစေရန် သတင်းဖော်ထုတ်နိုင်သူအား ဒေါ်လာ ၁ဝ သန်းအထိချီးမြှင့်မည်ဟု လိင်ဖျော်ဖြေရေးစာပေထုတ်ဝေသူ Larry Flynt က ကြော်ငြာသည်။ အောက်တိုဘာ ၁၅ ရက်ထုတ် ဝါရှင်တန်ပို့စ် သတင်းစာကြီးတွင် စာမျက်နှာပြည့်ကြော်ငြာဖြင့် ကြေညာမောင်းခတ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
ယခင်နှစ် သမ္မတရွေးကောက်ပွဲကာလတုန်းကလည်း Larry Flynt သည် ထိုကဲ့သို့ဆုကြေးထုတ်ခဲ့ဖူးသည်။ ဒေါ်နယ်ထရန့်၏ ဥပဒေနှင့်မညီ သော (သို့မဟုတ်) လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာနှိမ့်ချစော်ကားသောအမူအရာတစ်ခုခုကိုရိုက်ကူးထားသောဗီဒီယို (သို့) အသံဖိုင်တစ်ခုခုကို ဖော်ထုတ်နိုင်ပါက ဒေါ်လာတစ်သန်းဆုချမည်ဟု ကြော်ငြာခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
ယင်းကဲ့သို့ကြေညာအပြီးတွင် ဒေါ်နယ်ထရန့်၏ မိန်းမများကိုအထင်သေးရှုတ်ချသော ပြောစကားများပါသည့်ဗီဒီယိုဖိုင်တစ်ခု ထွက်ပေါ်လာခဲ့သည်။ ဒေါ်နယ်ထရန့်သည် ထိုကိစ္စကြောင့် ကျယ်ကျယ်လောင်လောင် ဝေဖန်ခံခဲ့ရသော်လည်း ရွေးကောက်ပွဲတွင်မူ ပြိုင်ဘက်ဟီလာရီကလင်တန်ကို အံ့အားသင့်ဖွယ်အနိုင်ရခဲ့သည်။ ယခုဂုဏ်သိက္ခာကြီးမားသော ဝါရှင်တန်ပို့စ်သတင်းစာကြီးတွင် ထိုကဲ့သို့ကြော်ငြာပါလာမှုကိစ္စနှင့်ပတ်သက်၍ သမ္မတဒေါ်နယ်ထရန့်၏ အိမ်ဖြူတော်က တစ်စုံတစ်ရာတုံ့ပြန်မပြောကြားသေးကြောင်း သိရသည်။
လုပ်ငန်းခွင် ဘေးကင်းရေး ဥပဒေဖြင့် စည်းကြပ်မှ လုပ်ငန်းရှင်အများစု လိုက်နာမည် ဟုဆို
ရန်ကုန် – စစ်တွေပြည်ထောင်စု ကားလမ်းမကြီးလုံခြုံရေး ဆောင်ရွက်နေသော တပ်မတော် စစ်ကြောင်းအား မ?
အမျိုးသမီးများ အပေါ် အကြမ်းဖက်မှုမှ တားဆီး ကာကွယ်ရေးဥပဒေကို ၂ဝ၁၉ ခုနှစ် အတွင်းပြဋ္ဌာန်းနိုင်ရ??